सोडियम thiosulfate। को र contraindications प्रयोग
विषको असर रोक्ने औषघि, विषाक्तता वा भारी धातु को यौगिकों अन्य लवण को अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ, छ धेरै नाम पर्याय हो: सोडियम hyposulfite, सोडियम thiosulfuric सोडियम giposulfatny। तर यो दबाइ लागि सबै भन्दा साधारण नाम - सोडियम thiosulfate। यसको आवेदन कारण वास्तवमा छ कि दबाइ अपेक्षाकृत सस्तो र गैर-विषाक्त। विषाक्तता तिनीहरूलाई, तामा, नेतृत्व, पारा लवण, बर्नर वा आयोडिन आर्सेनिक को उपचार को दक्षता। उनीहरूसँग अन्तरक्रिया को परिणाम स्वरूप, sulfites छन् जो विषालु शरीर, र अन्य गैर-विषाक्त वा कम विषाक्त पदार्थ गठन।5एमएल, 10 एमएल र 50 एमएल को क्षमता संग ampoule मा एक पाउडर रूपमा उपलब्ध छ, र 30% समाधान छ।
कारण rodanistye यौगिकों कम विषाक्त छन् जो गठन गर्ने Cyanide यौगिकों विषाक्तता (Cyanide) को लागि एक विषको असर रोक्ने औषघि रूपमा (सोडियम नाइट्राइट का संग संयोजन मा) प्रयोग अद्वितीय गुण गर्न। विषाक्तता detoxification को संयन्त्र hydrocyanic एसिड र यसको लवण एक अपेक्षाकृत गैर-विषाक्त thiocyanate आयन मा Cyanide को रूपान्तरण आधारित छ। इन्जाइम को कार्य अन्तर्गत (धेरै Tissues मा वर्तमान, तर मुख्य रूप जिगर मा) rodonazy tiosulfattsianid-seratransferazy गठन गरिएको छ। यो जीव नै यो बिस्तारै बगिरहेको प्रक्रिया मात्र सोडियम thiosulfate, जो को प्रयोग एक जीव मा सल्फर exogenous दाता को प्रवेश बढावा गर्न सक्छन् rodonazy मार्फत Cyanide neutralize तर बढाउने क्षमता छ।
सोडियम thiosulfate नैदानिक परिस्थिति को एक आश्चर्यजनक व्यापक दायरामा उपयोगी छ। यसबाहेक detoxication कार्य पनि सकिन्छ विरोधी भडकाऊ, antiparasitic (Antiscabietic) र सोडियम thiosulfate यस्तै छ भनेर desensitizing गुणहरू। यसको प्रयोग राम्रो खुजली को उपचार को लागि ज्ञात छ। mange विरामीहरु topically लागू को उपचार को लागि दबाइ: प्रभावित छाला limbs वा मुर्कुट्टा मा 60% सोडियम thiosulfate समाधान rubbed। जब यो dries, यी ठाउँहरू 6% हाइड्रोक्लोरिक एसिड समाधान संग moistened।
सामान्यतया intravenously प्रयोग सोडियम thiosulphate समाधान, orally र छाला मार्फत। Iv यो हाल Cyanide विषाक्तता र रोकथाम र क्यान्सर को उपचार को उपचार को लागि एक विषको असर रोक्ने औषघि रूपमा प्रयोग गरिन्छ। घाउ Cyanide यौगिकों मा - सामान्यतया 5-10 एमएल सोडियम thiosulfate को समाधान र समाधान को 50 एमएल को प्रशासित। Cyanide नशा यो एक छिटो बाहिर शासन छैन रूपमा, एक विषको असर रोक्ने औषघि को परिचय ढिलाइ छोड्न सक्दैनौं मृत्यु। तसर्थ, विरामीहरु ध्यान किनभने Cyanide विषाक्तता लक्षण को एक पुनरावृत्ति को संभावना को पहिलो दुई दिनमा अनुगमन गरेका थिए। यस मामला मा, अतिरिक्त आधा खुराक मा सोडियम thiosulfate थपियो। यो पनि औषधि एक संरक्षण गर्ने बस्तु रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
ठूलो अनुभव (एक सय वर्ष पुरानो लागि), एक चिकित्सकीय एजेन्ट रूपमा सुरक्षित प्रयोग सोडियम thiosulfate। यसको चिकित्सा प्रयोगमा डाटा 1895 देखि दस्तावेज। उदाहरणका लागि, गठिया, एलर्जी रोगहरु को एक संयुक्त चिकित्सा लागि, neuralgia लामो सुरक्षित दबाइ जस्तै सोडियम thiosulfate रूपमा चिनिने गरिएको छ। यसको प्रयोग एक antidepressant, antiarrhythmic र चयापचय एजेन्ट रूपमा प्रभावकारी हुन्छ। Thiosulfate यो सोडियम सल्फेट को एक मिश्रित गठन गर्ने मुक्त कण संग प्रतिक्रिया, अद्वितीय छ।
पदार्थ वृद्धि संवेदनशीलता - सोडियम thiosulfate को प्रयोगमा सीमित हुन सक्छ जसको लागि मुख्य सङ्केत छैन।
Contraindications: hypersensitivity, गर्भावस्था र स्तनपान। गर्भवती र lactating महिलाहरु को उपचार को लागि यसको उपयोग मात्र आपतकालीन को मामला मा हुनुपर्छ। सोडियम thiosulfate संग पशु प्रजनन अध्ययन बाहिर थिएनन् भएकोले यो दोहराने र भ्रूण गर्न प्रतिकूल प्रभाव कारण क्षमता असर गर्न सक्छ कि ज्ञात छैन।
मोमबत्ती "किजील मई": प्रयोगको लागि निर्देशन
दबाइ 'Klayra'। मार्गदर्शन dosing
Dysbiosis को उन्मूलन। निर्देशन: "Biovestin-lacto"
प्रयोग, analogs र समीक्षा लागि निर्देशन: दबाइ "Liposome गुण" छ
म "Cystone" लाग्न सक्छ गर्भावस्था को समयमा?
Tongkat अली प्लैटिनम। उत्पादन समीक्षा आफ्नो रुचि बनाउन अनुमति
कसरी घर मा कट तुलिप्स हेरचाह गर्न?
Bylina4कक्षाहरू: केही एक सारांश सूची
वास्तविक मान्छे को जीवन मा दान को उदाहरण
मानिसहरूको बानी। असल र खराब बानी। मानिसहरू महिलाहरु परेशान कि बानी
फिल्म "शट को अगाडि": अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र,, समीक्षा र टिप्पणीहरू
लेन्स को छनोट व्यक्तिगत विशेषताहरु र स्वाद मा निर्भर गर्दछ
संशोधन - कि के हो? परिमार्जनहरू को प्रकार
रूस मा र केवल कुकुर गर्न प्रसिद्ध स्मारक
Ferric क्लोराइड को एक जलीय समाधान कसरी तयार
"ठेक्का को स्थितिहरु": अभिनेता, भूमिकाको, सामग्री
वास्तुकला मा Romanesque शैली रोमन देखासिकी गर्छन्